उद्योग – Page3– Halkaro
चितवन । चितवन र नवलपुरका उद्योगीहरुको छाता संगठन चितवन उद्योग संघको १८ औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं अधिवेशन यही पुस २१ गते (शुक्रबार) हुँदैछ । भरतपुरस्थित चितवन प्रदर्शनी केन्द्रको सभाहलमा हुने अधिवेशनको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा चितवन क्षेत्र नं.३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समुद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको संघका कार्यकारी निर्देशक हरिहर भट्टराईले जानकारी […]
सिमेन्ट उद्योगमा १४ अर्बको लगानीमा चिनियाँ कम्पनी
काठमाडौं । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न लागेको चिनियाँ कम्पनी हुवाजिनसँग लगानी बोर्डले आयोजना लगानी सम्झौता (पीआईए)को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खानी विभागले १२ मंसिरमा हुवाजिनलाई खानी उपलब्ध गराएसँगै बोर्डले लगानी सम्झौताको प्रक्रिया थालेको हो । कम्पनीले धादिङको पानीखर्कमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति पाएको छ । योसँगै लगानी बोर्डले पीआईएका लागि छलफल गाडि बढाएको […]
ग्यास उद्योग मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा
प्रकाशित मिति : २०७४, ९ पुस आईतवार
काठमाडौँ । नेपालका अधिकांश ग्यास उधोग बोटलिङ प्लान्ट मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाईएको छ । अनुमति दिने उधोग विभाग नेपाल आयल निमग र गुणस्तर मापन गर्ने नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबीच समन्वय नहुँदा यस्ता उधोग मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन भईरहेका छन् । ग्यास उधोग गाउँबस्तीभन्दा पाँच किलोमिटरको दुरीमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उधोगील्े […]
निजि उद्योगहरुले सामाजिक दायित्व भुल्न नहुने पुर्व अर्थमन्त्री डा.लोहनीको भनाई
प्रकाशित मिति : २०७४, ८ पुस शनिबार
चितवन । पोल्ट्री क्षेत्रको अग्रणी उद्योग पन्चरत्न गु्रपले २५ औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम गरेको छ ।शनिबार पन्चरत्न फिड्स कल्याणपुरमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारी र उद्योग आसपासका सर्वसाधारणलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ । पुर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा वोल्दै पुर्व अर्थमन्त्री […]
चन्दा अातंक बढ्न थालेपछि उद्योगी व्यवसायीको मोवाइल अफ
काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको मोबाइल केही दिनयता धेरै समय अफ हुन्छ। चन्दा माग्नेको फोनबाट आजित भएपछि मोबाइल अफ गर्न थालेका हुन्। मंगलबार भेट हुँदा कसैलाई फोन गर्नुपर्दा मोबाइल अन गर्ने उनी कुराकानी सिद्धिनेबित्तिकै अफ गरिरहेका थिए। बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले चुनावको मिति घोषणा भएकै दिन मोबाइलको फोन बुकमा […]
काठमाडौँ । आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएको छ । मुलुकका सबै क्षेत्रका व्यक्तिलाई यसले उत्साही तुल्याएको भए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्यमी व्यवसायी भने गुप्तवास बस्न थालेका छन् । विगत वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि डर र धम्की देखाएर चन्दा असुल्ने भयले उनीहरू राजनीतिक दलहरूको […]
चितवनमा कोरियाली लगानीमा उद्योग
प्रकाशित मिति : २०७४, २६ आश्विन बिहीबार
चितवन । नेपालमा नै पहिलो पटक चितवनको रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. १४ मा कोरियन लगानीको नयाँ उद्योग खोलिएको छ । सुरक्षित र घर स्मार्ट घरको सपना भन्ने नारा सहित कोरियाली एसवाई ग्रुपले पूर्वी चितवनको रत्ननगर पिठुवा एसवाई प्यानल नेपाल नामक उद्योग खोलेको हो । आगामी तीन महिना भित्र सञ्चालनमा ल्याउने उद्योगको एक समारोहका विच रत्ननगरपालिका […]
अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र निमार्णस्थलको अवलोकन
प्रकाशित मिति : २०७४, ३१ जेष्ठ बुधबार
चितवन । जिल्लाको कालिका नगरपालिका–४ स्थित शक्तिखोरमा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको छ । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापा, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत देवनारायण सापकोटा, नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवंम् चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृृष्णप्रसाद अधिकारी, […]
उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा निर्वाचित (को-को हुने छन् राणाका सहयात्री ?)
प्रकाशित मिति : २०७३, ३० चैत्र बुधबार April 12, 2017
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शेखर गोल्छा विजयी भएका छन् । महासंघको ५१औँ वार्षिक साधारणसभाले गोल्छालाई आगामी तीन वर्षका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । महासंघको संशोधित विधानअनुसार निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेको छ । यसअनुसार भवानी राणाको कार्यकाल सकिएपछि अर्थात् आगामी […]
निर्वाचनको घोषणाले उद्योगीहरु उत्साही
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ चैत्र बिहीबार
चितवन । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेसंगै उद्योगि व्यावसायीहरु उत्साहित वनेको वताउनु भएको छ । परिसंघको राष्ट्रिय परिषद बैठकमा सहभागि हुन बिहीबार चितवन आउनु भएका शर्माले पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै स्थानिय तहको निर्वाचन पछि उद्योग संञ्चालनको वातावरण वन्ने वताउनु भएको हो । सरकारले अहिले औद्योगिक वातावरण वनाउने प्रयत्न […]